obsessive compulsive ရောဂါနှင့်စွဲ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) ရှိခြင်းဟာလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုစွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲ။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအယူအဆကိုဆန့်ကျင်။ အယုံအကြည်ကင်းမဲ့သူများကညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည် 'မတော်တဆဖြစ်မှု' မဟုတ်ဘဲ 'စွဲလမ်းမှု' မဟုတ်ကြောင်းမကြာခဏဆိုကြသည်။ အဲဒီစွဲ OCD "ကဲ့သို့" ဖြစ်ပါတယ်။ 'X ကိုအသုံးပြုရန်မလှူဒါန်း' ခြင်းသည် 'စွဲလမ်းမှု' X 'နှင့် (ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ) ကွဲပြားခြားနားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံ၍ ဖိအားပေးလိုက်သောအခါထိုအချက်အလက်များကိုမသိရသောသံသယများကအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုသည် OCD သာဖြစ်သည်။ မမှန်ပါဘူး။ သုတေသနကစွဲလမ်းမှုသည် OCD နှင့်များစွာထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ကွဲပြားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ DSM-5 တွင် OCD နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်သီးခြားအမျိုးအစားများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများကအခြေအနေနှစ်ခုသည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာကွဲပြားမှုရှိသည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက် ဒီ 2016 ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှ ကတက်ကဉျြးရုံးဖျော:
အချို့သောလေ့လာမှုတွေ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ရောင်စဉ်ပေါ်မှာတွေ့ကြပြီဖြစ်သောကြောင့် obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (40) conceptualize ဖို့စဉ်းစားပြီးပါပြီ။ hypersexual အပြုအမူများအတွက် OCD ရောဂါကနေတစ်ဦးချင်းစီအပျြောအပါးရရှိရာမှသူတို့အားအပြုအမူတွေကိုဖယ်ထုတ်ရာ OCD ၏ DSM-5 (1) အဖြေရှာတဲ့နားလည်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ OCD အမျိုးအစား obsessive အတွေးများကိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှိသော်လည်း, obsessive တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်သည့်ဆက်စပ် compulsive အပျော်အပါးထွက်သယ်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်။ အဆုံးစွန်သောသာ obsessive အတွေးများကိုနှိုးဆှကွာဟတဲ့အတွက်ချေမှုန်းရန်ဖျော်ဖြေခံနှင့်အတူ, obsessive နှင့် compulsive ထွက်လာပါတယ်အခြေအနေများနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရွံရှာခြင်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ် arousal ၏ OCD အစီရင်ခံစာခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ။ (41)
ကနေ (ကောက်နုတ်ချက်: porn စွဲ naysayers မကြာခဏ CSBD obsessive compulsive ရောဂါ (OCD) ထက်ပိုအချည်းနှီးဖြစ်၏, ဤကောင်းစွာ-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့စကားပြောအမှတ်အနည်းငယ်သာပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုရှိကြောင်းတောင်းဆို ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏အခန်းက္ပပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်, 2018).
အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ compulsivity နှင့် hypersexuality အကြားအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်ပါပြီ။ nonparaphilic hypersexual disorder ရောဂါရှိသည့်အမျိုးသားများအကြားတွင်စိတ် ၀ င်စားမှုမသန်စွမ်းမှု၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့မှုသည် compulsivity ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြသည့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါ (0%) မှ 14% အထိအထိရှိသည် (Kafka, 2015) ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိနိုင်သည် (မင်နီဆိုတာ Multiphasic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Inventory2(MMPI-2); Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen, & Kaemmer, 1989) - စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ကုသမှုခံယူသောအမျိုးသားများတွင်မြင့်မားသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စု, ဒါပေမယ့်ဒီခြားနားချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (Reid & Carpenter, 2009) အားနည်းနေခဲ့သည်။ DSM-IV အတွက်ဖွဲ့စည်းထားသည့်လက်တွေ့အင်တာဗျူး (SCID-II) (ပထမ၊ ဂစ်ဘွန်၊ စပိစ်၊ ဝီလျံ၊ ဘင်ဂျမင်၊ ၁၉၉၇) ၏ subscale မှအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသောအပြုအမူအဆင့်အကြားဆက်နွယ်မှုနှင့် hypersexuality အဆင့် hypersexual ရောဂါနှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေအထီးအကြားဆန်းစစ်ခဲ့သည်, အပြုသဘောအားနည်းအသင်းအဖွဲ့ဆီသို့လမ်းကြောင်းသစ် (Carpenter, Reid, Garos, & Najavits, 1997) တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဖျောပွရလဒ်များကို၏အခြေခံတွင်, compulsive hypersexuality ဖို့အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ထုံးစံ၌အထောက်အကူပြုရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ကနေသက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက် အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Don't-တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019):
obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် comorbidity (2019) - လေ့လာမှုမှဖော်ပြသည်မှာ CSBD နှုန်းသည် OCD ရှိသူများသည်ယေဘူယျလူ ဦး ရေထက်နိမ့်သည် -
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် CSBD ၏ဆက်စပ် sociodemographic နှင့်လက်တွေ့ features တွေစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ OCD နှင့်အတူလူနာ 3.3% လက်ရှိ CSBD တစ်ဦးရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရကြိမ်မြောက် 5.6% အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင်တစ်ဦးသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့အတူတစ်သက်တာ CSBD ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကျနော်တို့ကတခြားအခြေအနေများ, အထူးသဖြင့်ခံစားချက်, obsessive-compulsive နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပုံမမှန်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုပိုပြီး CSBD မရှိဘဲသူတို့အားထက် CSBD နှင့်အတူ OCD လူနာအတွက်ဘုံ, ဒါပေမယ့်မရကြ၏။ တှေ့ရှိ
Carnes (1991) နှင့် Coleman (1992) ကထောက်ပံ့ပေး CSBD ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏အစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်အထွေထွေလူဦးရေကနေလူဦးအထိ 6% compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထံမှခံရသည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ ဤခန့်မှန်းချက်များမည်သို့ရရှိသည်ကိုမသိရသေးသော်လည်း (၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်က Black)၊ နောက်ဆက်တွဲရောဂါဗေဒဆိုင်ရာသုတေသနများအရတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအကြိမ်ရေများပြားလာခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအရေအတွက်နှင့်လက်မထပ်ဘဲရေးရာများပါဝင်နိုင်သည့်လိင်ဆိုင်ရာမကျူးလွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည် (Dickenson) et al ။ , 2000) ။ OCD တွင် CSBD ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်လူ ဦး ရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံရသည် (Langstrom & Hanson, 2018; Odlaug et al, 2006; Skegg, Nada-Raja, Dickson, & Paul, 2013) ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ OCD အတွက် CSBD ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်နှင့်အခြားရောဂါရှာဖွေအလိုက်ရှိသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့သော်လည်းမ behavioral- သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related စှဲအတူ OCD အတွက် CSBD အခြားထကြွလွယ်သော compulsive နှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် comorbid ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်တစ်ခု compulsive-ထကြွလွယ်သောရောဂါအဖြစ် CSBD ၏စိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ ရှေ့ဆက် Going, အသံ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူစံအတိုင်းအတာ CSBD ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အနာဂတ်သုတေသနဒီရောဂါရဲ့စိတ်ကူးကိုခိုင်မာအောင်ရန်နှင့်အပိုဆောင်းပင်ကိုယ်မူလဒေတာစုဆောင်းရန်, နောက်ဆုံးမှာလက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာဆက်လက်သငျ့သညျ။
obsessive-compulsive disturb နှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Co- ဖြစ်ပေါ်အပြုအမူစွဲ၏နှုန်း: ပဏာမအစီရင်ခံစာ (2020) - လေ့လာမှုကဖော်ပြသည်မှာ (အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့် CSBD အပါအ ၀ င်) အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှုန်းသည်ယေဘုယျလူ ဦး ရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုသည် OCD နှင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
နည်းလမ်းများ OCD ကုသမှုကိုအထူးပြုသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာ ၂၃ ခုသည်၎င်းတို့၏နမူနာများအတွင်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှုန်းနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောရောဂါများကိုစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
ရလဒ်များ။ ၁၃ နိုင်ငံမှဖိတ်ကြားထားသောစင်တာ ၂၃ ခုမှ (၆၉.၆%) မှ ၁၆ ခုသည်စစ်တမ်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်လုံလောက်သောအချက်အလက်ရှိသည်။ အတည်ပြုထားသောရောဂါရှာဖွေကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကွဲပြားသောအချက်များဖြစ်သည်။ စင်တာအများစုသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်ရန် 'လက်တွေ့ရောဂါ' ကိုမှီခိုနေရသည်။ နောက်ဆုံးနမူနာ OCD ၏အဓိကရောဂါနှင့်အတူလူနာ 23 ပါဝင်သည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှုန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ပြproblemနာများအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက် ၈.၇%၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြ8.7.နာများအတွက် ၆.၈%၊ မဝယ်မဝယ်ဝယ်ယူမှုအတွက် ၆.၄%၊ လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါအတွက် ၄.၁% နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင် ၃.၄% ။
လောင်းကစားစွဲယခုအချိန်အထိတရားဝင်သစ်ကို DSM-5 (2013) တွင်အသိအမှတ်ပြုတစ်ခုတည်းသောအမူအကျင့်စွဲသောကွောငျ့အောက်ကကလေးကစာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြထားလေ့လာမှုများအများစုအတွက်, သုတေသီများလောင်းကစားစွဲနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုနှိုင်းယှဉ်။
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive စရိုက်များ (2008) အကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ် Meta-analysis သည်
မလှူစွဲ: obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်လောင်းကစားရောဂါ (2019) ကိုဖြတ်ပြီးစွဲသုံးခု core ကိုရှုထောင့်အကဲဖြတ်
Impulse-ထိန်းချုပ်ရေး Disorders ၏ compulsive aspect (2006)
compulsive အပြုအမူတွေနဲ့ obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD): OCD အကြားဆက်ဆံရေးမရှိခြင်း, မမှန်စားသုံးခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်း (1994)
obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် comorbidity (2019)
OCD နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူလူနာအလားတူအလုပ်မဖြစ်သိမြင်မှုရှိသလား (2004)
obsessive compulsive Disorder အတွက်အလုပ်မဖြစ်ဆုကြေး Circuitry
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအတွက်ပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ Neurophysiological ဆက်စပ်မှု: Impulse နှင့် compulsive ကနေပတ်သ က်. (2017)
လူ့ neurocognition အတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု: Impulse နှင့် compulsive ၏, လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ်ဆက်စပ်မှု (2014)
obsessive-compulsive ရောဂါ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ: ဘုံ features နဲ့အလားအလာကုသမှု (2011)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် compulsive ဝယ်: သူတို့အနေနဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောင်စဉ်အတွင်းလဲကျသလဲ? (2010)
obsessive-compulsive disturb နှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Co- ဖြစ်ပေါ်အပြုအမူစွဲ၏နှုန်း: ပဏာမအစီရင်ခံစာ (2020)
လက်ရှိနားလည်မှုနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန် (2009): ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအကြားဆက်ဆံရေး